Muqdisho: Wasiirka Arrimaha Gudaha oo xalay kormeeray degmooyin – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho: Wasiirka Arrimaha Gudaha oo xalay kormeeray degmooyin
2nd July 2014 A warsame Uncategorized 0
Muqdisho – Mareeg.com: Wasiirka Arrimaha gudaha iyo Federaalka Cabdullaahi Goodax Barre oo ay wehliyaan Mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Gobolka Benaadir oo uu ka midyahay Guddoomiyaha Gobolka Benaadir Xasan Muungaab, qaar ka mid ah guddoomiyeyaasha degmooyinka Gobolka benaadir ayaa xalay kormeer ku tegay qaar ka mid degmooyinka gobolka Banaadir.
Wasiirka iyo xubnaha la socday ayaa ugu horreyn degmada Warta Nabadda kula Afuray dad ka mid ah bulshada degmadaasi ku dhaqan, taasi oo qeyb ka ah barnaamijka Nabad ku Afur ee dowladda Soomaaliya ku dhawaaqday xilliga Ramadaanka.
Dhalinyarada degmada Warta Nabadda ayaa halkaasi ku soo bandhigay cayaaraha Hidaha iyo Dhaqanka, iyadoo mas’uuliyiintii ay ka qeyb qaateen cayaarahaasi hidaha iyo dhaqanka.
Gudoomiyaha Degmada Warta Nabadda Yaasiin Nuur Ciise oo kulanka Nabad ku Afur ka hadlay ayaa sheegay inay aad ugu faraxsanyihiin in caawa degmadu ay kula afuraan Mas’uuliyiin uu hogaaminayo Wasiirka Arrimaha gudaha.
Kulanka Afurka ah kaddib waxa ay Mas’uuliyiinta uu hogaaminayay Wasiirka Arrimaha ay kormeereen Isgoysyada Cali Kamiin oo ay in xoogaa ku hakadeen, Baar-Ubax iyo Jidka Warshadaha oo ay kula kulmeen dhalinyaro halkaasi ku caweyneysay oo ay kala qeyb qaateen madaxdii kormeerka halkaasi ku tegtay, waxayna kormeerkooda ku soo gabo gabeeyeen xaafadda Suuqa Xoolaha ee dhanka degmada Heliwaa halkaasi oo ay ku sugnaayeen sarakiil ka tirsan cidamada amniga.
Guddoomiyaha Degmada Heliwaa Maxamed Axmed Xaashi oo la hadlay mas’uuliyiinta ayaa sheegay in ay farxad u tahay kormeerka ay xalay ku tegeen xaafadda Suuqa xoolaha ee dhanka degmada Heliwaa, isagoo uga warbixiyay xaaladda amni ee degmada.
Guddoomiyaha Gobolka Benaadir ahna Duqa Muqdisho, Xasan Maxamed Xuseen “Muugaab” oo sheegay in kormeerkooda ay ka soo bilaabeen Warta Nabadda ayaa tilmaamay in ay ku soo gabo gabeeyeen xaafadda suuqa Xoolaha ee dhanka Degmada Heliwaa, isagoo ciidamada amniga uga mahadceliyay sida ay u adkeeyeen xoojinta amniga.
Wasiirka Arrimaha gudaha iyo Federaalka ee Soomaaliya, Cabdullaahi Goodax Barre ayaa sheegay in kormeerka ay ku tegeen qaar ka mid ah degmooyinka Gobolka uu qeyb ka yahay sidii ay u qiimeyn lahaayeen qorshaha Nabad ku Afur ee uu Madaxweynuhu ku baaqay, waxaana uu shacabka ka codsaday inay la shaqeeyaan ciidamada amniga.
Wasiir Goodax ayaa ku dooday in qorshaha Nabad Ku Afur guuleystay xilli Alshabaab 3 maalmood ee lasoo dhaafay Muqdisho ku dileen ilaa 10 ruux oo askar u badan.
Kormeerka Wasiirka arrimaha gudaha iyo mas’uliyiintii la socday ay ku tegeen qeybo ka mid degmooyinka Gobolka Banaadir ayaa waxa uu u jeedkiisu ahaa sidii ay ku ogaan lahaayeen xaaladda amni ee ka jirta caasimadda.
Light cargo plane crash over nairobi city